သီခါ Fr. Arulanthu Zaw Win Thein အတႈလႈမံးဆါအဆိကတကႈအကတီႈ တႈစံဏတဲၚတဲလီၚ | Radio Veritas Asia
သီခါ Fr. Arulanthu Zaw Win Thein အတႈလႈမံးဆါအဆိကတကႈအကတီႈ တႈစံဏတဲၚတဲလီၚ
ဖဲသီခါ Arulanthu Zaw Win Thein အတႈစံးဘ်ဳးလုႈထီဥ၀ဲမံဆါအဆိကတ႕ႈအပူၚ သီခါ Jerome Win Shwe Kyi အတႈစံဏတဲၚတဲလီၚတႈ
ဖဲ သီခါအသီ Fr. Arulanthu Zaw Win Thein အတႈစံးဘ်ဳးလုႈထီဥ၀ဲ တႈလုႈမံးဆါ အဆိကတ႕ႈတဘ်ီအပူၚ သီခါ Fr. Jerome Win Shwe Kyi အတႈစံဏတဲၚတဲလီၚတႈ
သီခါ””ပါဒိဥ Jerome အတႈစံဏတဲၚတဲလီၚတႈမ့ႈ၀ဲဒ္အံၚနဥ့လီၚ။
တနံၚအံၚ မ့ႈမုႈနံၚလ႕အစီဆွံ၀ဲနဥ့လီၚ။ မ့ႈ၀ဲခရံဏကစႈအမုႈနံၚလ႕အစီဆွံ၀ဲအသိး မ့ႈစ့ႈကီး တႈဒိးနဥ့ဎြၚအတႈဟ့ဥသးကညီၚတႈဆိဥဂ့ၚအလီၚဆီ၀ဲ ၀ံၚအလီႈခံ သီခါ Arulanthu Zaw Win Thein အတႈကဲထီဥ၀ဲသီခါ အတႈလုႈထီဥတႈလုႈမံးဆါ အဆိကတ႕ႈတဘ်ီအမုႈနံၚ နဥ့လီၚ။ မုႈတနံၚအံၚ စးထီဥလ႕ပဟဲတုၚ၀ဲလ႕ တႈဘါသရိဏအိဥတႈလီႈအံၚလံၚလံၚ တႈလ႕အဟဲအိဥထီဥ၀ဲလ႕အသးပူၚတထံဥမ့ႈ၀ဲ တႈအိဥဖွိဥကရ႕စီဆွံအတႈအိဥ၀ဲဒီး အတႈနဥ့သါသ့ဥတဖဥ အိဥဖ်ါ၀ဲလ႕တႈလီႈအံၚ အပူၚနဥ့လီၚ။ တႈအိဥဖွိဥကရ႕စီဆွံအတႈနဥ့သါ တႈလီၚတိဏလီၚဆီလ႕အအိဥဖ်ါ၀ဲအံၚ မ့ႈ၀ဲ အတႈအိဥဒီးတႈတမံၚဃီယ စီဆွံဂ့ၚ၀ါ၀ဲယ မ့ႈတႈလ႕အဘဥဃးဒီးပွၚခဲလ႕ႈယ ဒီးဟဲလီၚစ႕ၚလီၚသြဲဥ၀ဲလ႕ပွၚတႈမ႕ဖိနဥ့လီၚ။ ဘဥမႏုလ႕တႈဂ့ႈသ့ဥတဖဥအံၚ ပသ့ဥညါဘဥ၀ဲလ႕ပသူဥပသးအပူၚနဥ့လဲဥ။ မုႈတနံၚအံၚ တႈအိဥဖွိဥကရ႕ဖိသ့ဥတဖဥ ပဏဖွိဥအသးတဖ်႕ႈဃီ စံးထီဥပႀတ႕ၚသကိးဎြၚ ဖဲ၀့ႈ Dala, St.Michael တႈဘါသရိဏအပူၚယ မၚဃုဏသကိးတႈဖဲ သီခါအသီ အတႈစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥက့ၚဎြၚ အတႈလုႈမံးဆါအပူၚ လ႕တႈပဏသူဥပဏသးအိဥ၀ဲဒီး တႈဂ့ႈထဲတမံၚဃီအပူၚ အဃိနဥ့လီၚ။ ခံထံဥတထံဥမ့ႈတႈဂ့ႈလ႕အဘဥဃးဒီး တႈစီတႈဆွံနဥ့လီၚ။ ကဎဲႈပွၚလ႕အဘူဥဘါဃုဏသကိးတႈဖဲ တႈလုႈမံးဆါအပူၚသ့ဥတဖဥ မ့ႈပွၚလ႕အအိဥဒီး အတႈအ႕ႈလီၚအလီၚဆီ၀ဲ ဒ္အတႈဒိးနဥ့၀ဲဎြၚအတႈကိး အိဥ၀ဲအသိးနဥ့လီၚ။ သီဘူဥသီခါသ့ဥတဖဥယ သဘ့်မုႈသဘ့်ခြါသ့ဥတဖဥယ တႈအိဥဖွိဥသရဥ သရဥမုႈသ့ဥတဖဥ တႈအိဥဖွိဥကရ႕ဖိသ့ဥတဖဥ အတႈအိဥဖွိဥသကိး၀ဲလ႕ တႈဃ့ဘါထုကဖဥသကိးတႈအဃိ မ့ႈတႈလ႕အဘဥဃးဒီး တႈစီတႈဆွံနဥ့လီၚ။ တႈဂ့ႈသ႕မံၚတမံၚလ႕အမ့ႈ တႈအိဥဖွိဥကရ႕ မ့ႈတႈလ႕အဘဥဃးဒီးပွၚခဲလ႕ႈ လ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ ဒ္ပထံဥဘဥ၀ဲဖဲတႈမၚအသးအံၚအပူၚအသိး မ့ႈပွၚလ႕ကီႈမိႈပွႈအ့ရွ႕ႈသ့ဥတဖဥယ ပွၚလ႕ကီႈမိႈပွႈဎူရပၚသ့ဥတဖဥယ ပွၚလ႕ ကီႈမိႈပွႈ Africa သ့ဥတဖဥ အတႈဘူဥဘါမၚဃုဏသကိးတႈနဥ့လီၚ။ အအံၚမ့ႈ တႈအိဥဖွိဥကရ႕အတႈပနီႈ လ႕အပဏဖ်ါထီဥ တႈလ႕အဘဥဃးဒီးပွၚခဲလ႕ႈ လ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥနဥ့လီၚ။ တႈဂ့ႈအဂၚတမံၚ မ့ႈတႈလ႕ အဟဲလီၚစ႕ၚလီၚသြဲဥ၀ဲလ႕ ပွၚတႈမ႕ဖိသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ။ ဖဲလ႕အပူၚကြံဏ အနံဥ ၂၀၀၀ လံၚလံၚ တႈအိဥဖွိဥကရ႕လ႕ ခရံဏကစႈဒုးအိဥထီဥ၀ဲအံၚ မၚတ့ႈလံ၀ဲတႈဖံးတႈမၚ စးထီဥလ႕ ပွၚတႈမ႕ဖိစီၚပ့းတရူး ဒီးတုၚလ႕မုႈတနံၚအံၚ ကသ့မၚကဒီးတႈဆူညါထီဘိအဂီႈ တႈအိဥဖွိဥကရ႕ အိဥဖ်ဲဥထီဥကဒီး၀ဲသီခါတဂၚ နဥ့လီၚ။ မ့ႈ၀ဲတႈဟဲလီၚစ႕ၚလီၚသြဲဥ၀ဲလ႕ ပွၚတႈမ႕ဖိသ့ဥတဖဥ၀ံၚအလီႈခံ တႈအိဥဖွိဥကရ႕မၚကဒီးအတႈဖံးတႈမၚ တုၚမုႈမဆါတနံၚအံၚ အဃိ တႈအိဥဖွိဥကရ႕အိဥ၀ဲဒီးအတႈနဥ့သါ လြံဥမံၚလြံဥမေိဖဲတႈလီႈအံၚ နဥ့လီၚ။ ပဟဲဘူဥဘါ စံးထီဥပႀတ႕ၚသကိးဎြၚဖဲ သီခါ Fr. Arulanthu Zaw Win Thein အတႈလုႈမံးဆါ အဆိကတ႕ႈတဘ်ီအံၚ မ့ႈတႈလ႕ အဂ့ၚ၀ဲ အလုႈအပွၚ့ဒိဥ၀ဲနဥ့လီၚ။ တႈအိဥဖွိဥသးပွႈ ပဏဖ်ါထီဥစ့ႈကီးအတႈအိဥမူအိဥဂဲၚ အဂ့ႈအက်ိၚဖုႈကိဏဖိ စ့ႈကီးနဥ့လီၚ။ ဖဲ ၂၀၀၆ အနံဥ ႏုႈလီၚ၀ဲဆူ တႈသိဥလိဒုးကဲထီဥသီခါကေိလ႕အဖုႈတပနီႈ အိဥလ႕၀့ႈ Bago နဥ့လီၚ။
ကိးနံဥဒဲးထံလုႈဘ႕တႈလ႕ ၀့ႈ Bagoယ ဒီးပွၚဘဥမူဘဥဒါသ့ဥတဖဥ ဃ့ကညးတႈမၚစ႕ၚ တႈဟ့ဥမၚဘူဥမ့ၚဘိဥဖိသ့ဥတဖဥ လ႕တႈစူၚခါနဥ့လီၚ။ မ့မ့ႈလ႕တႈကိႈခါတခီ ထံတအိဥ၀ဲအတႈကီတႈခဲနဥ့လီၚ။ ပွၚလိဏဘဥကဒီးသိလ့ႈအတႈမၚစ႕ၚ လ႕တႈစိဏဆွ႕ထံအဂီႈ ကိးနံဥဒဲးနဥ့လီၚ။ သီခါအသီအံၚအတႈသ့တႈဘဥတမံၚမ့ႈ၀ဲ တႈမၚဘ်းစဲးထံအက်ိၚအက်ဲ ဒ္သိးထံ ကလဲၚတုၚ၀ဲဆူတႈလီႈလ႕အကဘဥလဲၚတုၚ၀ဲအအိဥနဥ့လီၚ။ မ့ႈ၀ဲတႈဆီဥထြဲမၚစ႕ၚဖးဒိဥတမံၚလ႕ ကေိအဂီႈ နဥ့လီၚ။ ဖဲသီခါအသီအံၚ နဥဟူဘဥ၀ဲလ႕ အပႈစူးကြံဏအသးအခါ သီခါ Jerome လဲၚဘူဥဘါဃုဏတႈ ဒီးဖဲမုႈနံၚအံၚအပူၚ လံဏစီဆွံအဆ႕လ႕ပဖးအီၚမ့ႈ၀ဲ ပွၚမ့ႈသးအိဥပိဏကစႈအခံဒီး ပကဘဥပဏတ့ႈကြံဏပမိႈပပႈ ပဒီပုႈ၀ဲ ပဘူးပတံဥသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ။ ဒီးသိဥသီ ဟ့ဥဂံႈဟ့ဥဘါအီၚလ႕ လံဏစီဆွံအဆ႕အံၚ အဖီခိဥနဥ့လီၚ။ အအံၚမ့ႈ၀ဲ တႈပနီႈတမံၚလ႕ အကသ့ပိဏထြဲ၀ဲခရံဏကစႈအခံယ နဘဥပဏတ့ႈကြံဏနပႈအံၚလ႕ ဟီဥခိဥခ်႕အတႈအိဥမူအလီႈခံယ မ့ႈ၀ဲတႈပနီႈတမံၚလ႕နကမၚတႈသးခုကစီႈအတႈမၚ အဂီႈယ ဒီးအသုတဘဥအိဥ၀ဲဒီးတႈသူဥဟးဂီၚသးဟးဂီၚဘဥဒီး က်ဲလ႕အကဘဥလဲၚ၀ဲခါဆူညါအံၚ ကအိဥဖ်ါ၀ဲလ႕မဲႈညါအဂီႈ မ့ႈ၀ဲဎြၚအတႈသုးတႈက်ဲၚ အဂ့ႈ သီခါ Jerome စံး၀ဲနဥ့လီၚ။ ဖဲနဥ့အကတီႈ ဟီဥက၀ီၚအသီခါဖဲတႈလီႈအံၚမ့ႈ၀ဲ သီခါ Peter Gyi နဥ့လီၚ။ မုႈတနံၚအံၚ ပဘူဥဘါသကိးတႈဖဲအံၚ မ့ႈလ႕ဎြၚဟ့ဥပွၚသီခါအသီတပါအဃိ နဥ့လီၚ။ ဖဲ ၁၉၉၇ ” ၉၈ အနံဥ (သီခါ Jerome) စံး၀ဲလ႕ အမူအဒါလီၚဘဥ၀ဲဖဲ တႈလီႈအံၚနဥ့လီၚ။
တႈအိဥဖွိဥကရ႕အဟီဥက၀ီၚအသီ ဖဲ Dala အတႈလီႈအံၚ ဘဥတႈဒုအိဥထီဥအီၚဖဲ ၂၀၀၅ အနံဥ နဥ့လီၚ။ စးထီဥလ႕၂၀၀၅ တုၚလ႕ ၂၀၁၈ အတီႈပူၚယ Dala ဟီဥက၀ီၚအံၚ အတႈဟဲအိဥထီဥ၀ဲ ၁၃ နံဥအကတီႈနဥ့လီၚ။ ဖဲ ၁၃ နံဥအတီႈပူၚ မၚနဥ့ဘဥ၀ဲသီခါအသီ ၂ ပါနဥ့လီၚ။ မၚနဥ့ဘဥ၀ဲ ဖံ၀ါအါဒံအါဂၚစ့ႈကီးနဥ့လီၚ။ အဃိ မ့ႈ၀ဲတႈလီႈတႈက်ဲလ႕ အအိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲ ပွၚမၚတႈသ့ဥတဖဥလ႕ တႈအိဥဖွိဥကရ႕အဂီႈ စ့ႈကီးနဥ့လီၚ။ သီခါ Fr. Arullanthu Zaw Win Thein မ့ႈ၀ဲ သီခါခံဂၚတဂၚ လ႕အကဲထီဥ၀ဲလ႕ တႈလီႈအံၚနဥ့လီၚ။ သီဘူဥသီခါသ့ဥတဖဥယ ဖံ၀ါသ့ဥတဖဥယ တႈအိဥဖွိဥသရဥသ့ဥတဖဥ ဒီးပွၚမၚတႈလ႕ တႈအိဥဖွိဥကရ႕အပူၚအါဒံအါဂၚသ့ဥတဖဥ ဟဲအိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲ တႈလီႈတႈက်ဲနဥ့လီၚ။ မ္ပကထုကဖဥသကိး ဒ္သိးပွၚလ႕အကဟ့ဥလီၚအသး လ႕တႈသူဥဘဥသးသ့အပူၚ ဒ္အံၚသ့ဥတဖဥ ကအိဥထီဥကဒီးဆူညါအဂီႈနဥ့လီၚ။ လ႕လံဏတႈသးခုကစီႈအပူၚ ပနဥဟူဘဥ၀ဲ ပွၚလ႕အမိႈနဥ့သးလီ လီႈဒိဥလၚထီသ့ဥတဖဥ ကဘဥပဏအသး လ႕လီႈခံနဥ့လီၚ။ ပွၚလ႕အဆ႕ကဲထီဥ ပွၚခိဥပွၚနဥသ့ဥတဖဥ ကဘဥမ့ႈပွၚမၚခ့ပွၚအတႈမၚ လ႕ပွၚခဲလ႕ႈအဂီႈနဥ့လီၚ။ တဘ်ီဃီအိဥသ့ဥနီႈထီဥ၀ဲ Mother Teresa လ႕အတႈဆိကမိႈအပူၚအဂ့ႈစံး၀ဲနဥ့လီၚ။ သီခါခံဂၚလ႕ကီႈ India အိဥဒီးပွၚဖဲအံၚစ့ႈကီးနဥ့လီၚ။ ဒ္ပနဥဟူတ့ႈလံ၀ဲလ႕ လံဏတႈသးခုကစီႈအပူၚအသိး Mother Teresa အိဥ၀ဲလ႕တႈလီႈခံ ဒ္အဆ႕မၚနဥ့တႈလီႈလ႕မဲဥညါအဃိ နဥ့လီၚ။ မၚ၀ဲ တႈအခ့အပွၚအတႈမၚ လ႕ပွၚခဲလ႕ႈအဂီႈ လ႕အတႈအိဥမူအပူၚနဥ့လီၚ။ ပ၀ဲသ့ဥတဂၚဘဥတဂၚယ ဖဲပဟဲႏုႈလီၚ၀ဲဆူဟီဥခိဥခ်႕အခါ ပဟဲႏုႈလီၚ၀ဲဒ္ပွၚကညီတဂၚအသိး နဥ့လီၚ။ ၀ံၚအလီႈခံ ဒ္မိႈပႈဖံဖုသ့ဥတဖဥ အတႈစူဥတႈနဏအိဥ၀ဲအသိးမ့ႈဂ့ၚ မ့တမ့ႈ ခီဖ်ိလ႕ပကစႈဒဥ၀ဲ ပတႈဃုသ့ဥညါမၚလိပသး၀ံၚအလီႈခံ ပတူဥလိဏ၀ဲတႈစူဥတႈနဥ လ႕ပတႈအိဥမူအပူၚ နဥ့လီၚ။ အဆိကတ႕ႈ ပဟဲႏုႈလီၚ၀ဲဆူ ဟီဥခိဥခ်႕အံၚဒ္ပွၚကညီတဂၚအသိး နဥ့လီၚ။ Mother Teresa ဟံးဃဥ၀ဲတႈဂ့ႈအံၚ လ႕အတႈအိဥမူအပူၚနဥ့လီၚ။ မၚ၀ဲတႈသးခုကစီႈအတႈမၚ လ႕တႈဂ့ႈအံၚအဖီခိဥနဥ့လီၚ။ မ့ႈပွၚလ႕အမံၚဟူသဥဖ်ါ၀ဲနဥ့လီၚ။ အိဥတ့ႈ၀ဲလ႕တႈလီႈခံကတ႕ႈအဃိ မ့ႈပွၚလ႕အအိဥ၀ဲလ႕တႈမဲဥညါကတ႕ႈ နဥ့လီၚ။ မၚ၀ဲ တႈအခ့အပွၚအတႈမၚလ႕ပွၚအါဂၚအဂီႈအဃိ ဘဥတႈသ့ဥညါအီၚလ႕ ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥနဥ့လီၚ။ တမ့ႈပွၚလ႕အပဏလီၚဖး၀ဲ ပွၚကလုႈအလီၚ၀ဲယ တႈဘူဥတႈဘါအလီၚဆီ၀ဲယ တပဏလီၚဆီ၀ဲပွၚညါဘီဥညါစႈယ တပဏလီၚဖး၀ဲ ပွၚကဲဒိဥယပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိသ့ဥတဖဥဘဥဒီး တပဲဏဖးနီၚဖး၀ဲ ပွၚသူပွၚ၀ါဘဥနဥ့လီၚ။ ခဲလ႕ႈမ့ႈ၀ဲပွၚကညီသ့ဥတဖဥ ဒ္လ႕ဎြၚအတႈသိဥလိနဲဥလိတႈအိဥ၀ဲအသိး အိဥမူလူၚပိဏထြဲ၀ဲအဃိ မ့ႈ၀ဲဖံ၀ါဖးဒိဥလ႕ အပဏဖ်ါ၀ဲဒိဂ့ၚတဲႈဘဥ တဂၚနဥ့လီၚ။ ဒ္နဥ့အသိး သီခါလ႕အကလုႈထီဥ အတႈလုႈမံးဆါအဆိကတ႕ႈတဘ်ီ တပါအံၚစ့ႈကီး ဒ္တႈသးခုကစီႈလ႕ပနဥဟူဘဥတ့ႈလံ၀ဲအသိး ကသ့အိဥမူထြဲ၀ဲတဘိဎူႈဃီအဂီႈ ပကဘဥဃ့ထုကဖဥကဒီး၀ဲနဥ့လီၚ။ Mother Teresa အတႈကတိၚတနီၚမ့ႈ၀ဲ တႈအဲဥတႈကြံဘဥတႈစးထီဥအီၚလ႕ဟံဥပူၚယ ပကဘဥအဲဥကြံပဒူဥဖိထ႕ဖိဒီးပွၚအိဥလ႕ပဃ႕ၚယ ဟ့ဥနီၚလီၚတႈအိဥဒီးပွၚသ့ဥတဖဥဆူပွၚဖွီဥဖိဎဥဖိ ပွၚလ႕အတလ႕တပွဲၚ၀ဲသ့ဥတဖဥယ ပကဘဥဟ့ဥနီၚလီၚ တႈနံၚကမွံ တႈစံးကတိၚ တႈဆ႕ကတီႈ ဒီးတႈအိဥဒီးပွၚသ့ဥတဖဥ နဥ့လီၚ။ ထံဥဎြၚလ႕ ပွၚလ႕နထံဥဘဥအီၚလ႕ကိးမုႈနံၚဒဲးအပူၚ နဥ့တက့ႈ။ ပအဲဥကြံပွၚခဲလ႕ႈတဘ်ီဃီ တမ့ႈတႈလ႕အညီ၀ဲဘွါ၀ဲဘဥနဥ့လီၚ။ ပကဘဥပဏဖ်ါထီဥတႈအဲဥဆူ ပွၚလ႕ပထံဥဘဥအီၚ တဂၚဘဥတဂၚ အဖီခိဥနဥ့လီၚ။ ပစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥသကိးဎြၚနဥ့လီၚ။ သီခါအသီစ့ႈကီး လုႈထီဥ၀ဲအတႈလုႈမံးဆါအဆိကတ႕ႈ နဥ့လီၚ။ ဒ္ပနဥဟူဘဥ၀ဲ ထူကလုႈဎြၚကထါ လ႕မုႈတနံၚအံၚအသိး သီခါအံၚ ကသ့ဒိကနဥ အိဥမူပိဏထြဲ၀ဲ ထီဘိအဂီႈ မ္ပကဃ့ထုကဖဥနဥ့တႈလ႕အဂီႈတက့ႈ။ ဒီးလ႕ သီခါအံၚအတႈလဲၚက်ဲအပူၚ မ္ပသုတဘဥမ့ႈ၀ဲ တႈနိးတႈဘ်းလ႕ အကလီၚဃံၚ၀ဲအဂီႈတဂ့ၚ။ ဒ္သိးအကအိဥမူ၀ဲဒ္ တႈအိဥမူလ႕အမၚနဥ့တ့ႈလံ၀ဲအသိးအံၚ လ႕တႈသူဥတီသးလိၚ တႈသူဥဖွံသးညီအပူၚ တစိၚသးအဂီႈ မ္ပကထုကဖဥနဥ့တႈလ႕ အဂီႈနဥ့တက့ႈ။ မ္ဎြၚဆိဥဂ့ၚဘဥသုကိးဂၚဒဲးနဥ့တက့ႈ။
Source: RVA Sagaw Karen Service
TO VIEW VIDEO: PLEASE CLICK THE POST BELOW.
A short history of Keng Tung Diocese in Myanmar.(20,6,2019) …
တႈမၚလီၚမဥကြံဏ တႈမၚဆူဥမၚစိး လ႕အဘဥဃးဒီး တႈမ႕ဆူဥပွၚလ႕ မုႈခြါတႈမံဃုဏဂဲၚဃုဏအမုႈနံၚ လါဎူၚ ၁၉ သီ
၀့ႈတကူဥသီခါကရ႕ခိဥက်႕ႈ Cardinal Charles Bo အတႈဃ့ကညးတႈ လ႕ထံကီႈတႈမုဏတႈခုဥအဂီႈ
သီခါသးစႈ လ႕အအိဥဒီး Cancer, ဒိးနဥ့သီခါအလီႈ၀ံၚ တဎံဏတမီႈသံ၀ဲ တႈကစီႈ
© 2019 Radio Veritas Asia. All rights reserved.